Congorosa, Zazi izibonelelo zeti ▷ ➡️ Fumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Ekuqaleni ukusuka eMzantsi Melika kwaye kulula ukuyifumana kwimimandla yeAmazon, iCongorosa santa sisityalo seti esityiwa ngokubanzi.
Ineseti yeepropathi, phakathi kwazo epigallocatechin ebonakalayo, enesenzo sokuphilisa kwizilonda zesisu. Ke ngoko, ukusetyenziswa kwayo ngumanyano kunyango lwezi ntlobo zeengxaki.
1 Izibonelelo zeCongorosa
1.1 Inceda ukuthintela nokunyanga isifo se-gastritis
1.2 Amandla okuphilisa
1.3 Ukusebenza ngokunyanga izilonda zesisu
1.4 Kukhupha iigesi
1.5 Isiphumo somchamo
2 Yimalini kwaye ungayisebenzisa njani
3 Sukuyidla iCongorosa:
Inceda ukuthintela nokunyanga isifo se-gastritis
Iitannins zesityalo (kubandakanya i-epigallocatechin) zinciphisa ukugcinwa kwehydrochloric acid ngeeseli zesisu kwaye, ngenxa yoko, kunciphisa ukungaphatheki kakuhle kwesisu.
Iitonic kunye ne-silicic acid zine-antiseptic kunye nonyango. Ke ngoko, kuqhelekile ukuba ezinye izinto zokuthambisa zendalo kunye neemveliso zobuqhetseba ziqulathe ioyile ye-hawthorn yokuthambisa ulusu. Kwifomu yeti, iyanceda ukunciphisa ukubanda kunye neempawu zomkhuhlane.
Ukusebenza ngokunyanga izilonda zesisu
Ngenxa yamandla ayo okuphilisa, iti isetyenziswa kakhulu kunyango lwezilonda. Iitanini kwisityalo zilawula imveliso yelungu lehydrochloric acid, enoxanduva lokonakalisa izicwili. Inezinto ezinokubangela iintlungu, kungoko iyanciphisa iintlungu kunye nokuphazamiseka kwale ngxaki.
Ii-Tannins zikwanoxanduva lokunciphisa le ngxaki, njengoko ziphazamisa ukubola kwesisu. Ngesi sizathu, ngokwaphula umthetho, kuphucula ukuhanjiswa kwamathumbu kunye ne-enzyme ebizwa ngokuba yiminchilage.
I-Triterpenes ikhuthaza ukuveliswa komchamo, nangona ubuqili.
Yimalini kwaye ungayisebenzisa njani
Inani eliphakanyisiweyo lifikelela kwiikomityi ezintathu zeti ngosuku. Kuyenzeka ukuba ufumane isityalo kwifomule, nangona kunqabile. Kule nguqulo, kucetyiswa ngokubanzi ukuba uthathe iipilisi ezimbini kabini kathathu ngemini. Okokugqibela, kukho ukhetho lokutya i-hawthorn ngokukhupha kwayo, ngamaconsi angama-20 ahlanjululwe kwiglasi yamanzi.
Kwimeko yenguqulo yeti, inokudliwa emva kokutya ukuququzelela ukwetyisa kunye nokuphepha ukungahambi kakuhle.
Ukuba ukhulelwe, OKANYE unezicwangciso. Ngokophando, i-hawthorn inezinto ezinciphisa isisu.
Kwisigaba sokuncancisa. Ingca inokunciphisa imveliso yobisi lwebele.